Mabhuku Akanakisa Ekuzvibatsira Aunogona Kuverenga Kuti Uchinje Hupenyu Hwako | Zvazvino Zvinyorwa
Kune dzimwe nguva muhupenyu apo mamiriro edu epfungwa asiri akanakisa, uye kunyangwe tikayedza zvakadii, hatibude mukushushikana nekusuwa. Neichi chikonzero, dzimwe nguva, kunyangwe iwo akanakisa mabhuku ekuzvibatsira anotibvumira kusendamira pane chimwe chinhu, kutenda kunotipa simba rekuenderera kumberi.
Kana iwe ukazviwana iwe uri mumamiriro ezvinhu akadai uye uchida kutsigirwa, nhasi tinoda kuzvipa iyo ne mabhuku akanakisa ekuzvibatsira aunogona kuwana pamusika. Zvino, rangarira kuti iwo mabhuku, uye kuti iwo anogona kukuita iwe kufunga zvakasiyana. Asi simba rekubuda mauri nderako chete.
1 Mabhuku ekuzvibatsira, anonyatsoshanda here?
2 Mabhuku akanakisa ekuzvibatsira atinokurudzira
2.1 Zvide iwe sehupenyu hwako zvinoenderana nazvo
2.2 Chinja uropi hwako neNLP
2.3 Kunyengedza kweIcarus
2.4 Maitiro ekukunda iwe pachako panguva yedambudziko
2.5 Hunyanzvi hwekusava neshungu muhupenyu
2.6 Simba risina miganhu
Mabhuku ekuzvibatsira, anonyatsoshanda here?
Tinoda kuva vakatendeseka newe. Mabhuku ekuzvibatsira ndeemanyowani ayo, aine mazwi evanyori, munhu anoda rubatsiro anoitirwa kufungisisa pane zvakaitika, nei iwe wadonha mune ino mamiriro uye nemabatiro aungaita dambudziko iri zvakaringana kuti uwane zvakakwana kugadzirisa.
Uye ndezvekuti, kana iwe wakashata, iwe unogaro tarisa kunetsa dambudziko kubva kune yakashata, yega divi ... pasina kufunga nezve zvese zvakakomberedza zvinhu zvinogona kukanganisa, zvese mune mamiriro uye zvakare mukugadziriswa kwedambudziko .
Nemasikirwo, vanhu vazhinji vanowanzo funga zvakashata kana vaine dambudziko uye nekukudza mhedzisiro inovakonzera kukiya kupinda mudenderedzwa rinotyisa rinogona kupindwa muropa. Neichi chikonzero, pane dzimwe nguva apo chirevo kubva kumunhu, shamwari kana mutorwa, chinogonesa chip icho chinokupa iwe simba raunoda kuti ubude mune yakashata yakashata uye utarisane nehupenyu zvakare.
Chimwe chinhu chakafanana chinoitika mumabhuku ekuzvibatsira. Izvo izvo vanyori vari kutsvaga ndizvozvo aya mazwi anonyura mukati mehupenyu hwako kuti akupe simba rekuenda kumberi. Haasi mushonga, uye chero bhuku rekuzvibatsira harisi kuzogadzirisa matambudziko ako; izvo zvinogona chete kuitwa newe. Asi iwe unofanirwa kurega kuzvinzwira tsitsi kuti uzviite.
Uye, sekutaura kunoita tsumo yechiChinese, "Kana ukadonha kagumi, simuka gumi nerimwe." Zvinorevei? Kuti mwana akasimba zvakakwana kuti apore kubva kune chero hupenyu hwunoita kwauri. Haisi nyaya yekubatirira pabhuku; asi kurwira zvaunoda. Uye hongu, zvinogona kukubhadhara zvakanyanya nguva imwe neimwe, asi vanhu, senge nenyaya yebhokisi raPandora, havarase tariro, kunyangwe iri kuita diki uye diki.
Mabhuku akanakisa ekuzvibatsira atinokurudzira
Zvese zvataurwa, isu zvakare hatigone kuti hapana mabhuku ekuzvibatsira anoshanda chaizvo. Kune vamwe vari kuzokupa ruoko, senge rudzi rwekudzidzisa, kuitira kuti iwe uongorore dambudziko uye ubude mumamiriro iwayo. Izvo hazvigadzirise dambudziko, asi zvichaita kuti iwe ufunge zvakasiyana uye izvo zvinokutendera iwe kuti utsvage, gadzira uye uwane mhinduro dzisina kumboitika kwauri.
Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi akanakisa ekuzvibatsira mabhuku kwatiri? Ramba uchifunga kuti ivo vanongova sarudzo, uye kuti havazi vese vanoshandira vanhu vese; imwe neimwe yadzo inogona kushandiswa kune imwe mhando yemunhu asi kwete imwe.
Zvide iwe sehupenyu hwako zvinoenderana nazvo
Zvide Iwe Sako ...
Iri bhuku rakanyorwa na Kamal Ravikant ndeimwe yeakanyanya kukodzera kune avo vane kuzvidzora kwakaderera. Uye ndezvekuti dzimwe nguva nzanga ine hutsinye zvekuti, kune avo vakasiyana, zvimwe nekuti vane mashoma ekuwedzera kilos, nekuti ivo vakangwara, kana nekuda kwechimwe chikonzero vanovaita kuti vataridzike sevakaraswa, kana isingafanirwe iva saizvozvo.
Kana iwe uri mumwe weavo vasingazvide iwe pachako, bhuku iri rinogona kunge rakaringana kubatana newe uye uone kuti zvese zvaunofunga chinhu chete chazvinoita kuzvikuvadza iwe.
Chinja uropi hwako neNLP
Shandura uropi hwako ne ...
Yakanyorwa naWendy Jago, inoshandisa neurolinguistics, inozivikanwa zvakare nechidimbu NLP, kumisikidza shanduko mune kufunga. Uye, sekungofanana nevatengi vanogona "kunyengetedzwa" kuti vatenge zvigadzirwa, iwe unogona zvakare kugadzirisa patsva muuropi hwako kuti uzvishandure.
Muchokwadi, iri nderimwe remabhuku akanakisa ekuzvibatsira ayo kunyangwe nevanoongorora nezvepfungwa uye nevarairidzi vekukura.
Kunyengedza kweIcarus ...
Yakanyorwa naSeth Godin, inobata nayo zvitendero zvekuti tinopedzisira tave kuzvitenda pachedu uye zvinotitadzisa kana zvasvika pakurarama hupenyu. Semuenzaniso, iyo nyaya yekuti haugone kuita ichi kana icho chinhu nekuti haubatsire, kana nekuti wakagara uchiudzwa kuti hauna kukosha. Unozvivharira uye wotenda chimwe chinhu chisingafanire kuve chokwadi.
Nekudaro, izvo zvinoedzwa nebhuku nderekuti iwe uburitse pachena izvo zvikanganiso zvinodzora hupenyu hwako uye wozviongorora, kuti iwe unonyatsoona kana zviri izvo chaizvo kana zvisiri, uye, nenzira iyi, pwanya zvivhariso uye zvese zvinoita kuti usazvikande kuzviita chimwe chinhu chaunoda.
Maitiro ekukunda iwe pachako panguva yedambudziko
Maitiro Ekuwana Kupfuura Nguva ...
Kubva kuna Shad Helmstetter, rimwe remabhuku akabudirira kwazvo munguva dzazvino. Uye ndezvekuti, nekumhanya kuchikwira, mabasa achinyangarika uye zvichiita kuti zviome kuve munzira yakatsiga mumusika wevashandi, inogona kuve rimwe remabhuku ekuzvibatsira kukuzadza nesimba uye kutarisana nematambudziko iwayo nenzira yakanaka.
Hunyanzvi hwekusava neshungu muhupenyu
Unyanzvi hwekusavava ...
Iri bhuku raRafael Santandreu rinotsvaga kuvhura maziso ako uye uone kuti mazhinji ematambudziko emanzwiro aunayo anokonzerwa dzidziso dzakatsauka dzenzanga yatinofanira kurarama. Uyezve, anoratidzira bhuku rake nerakaitika zviitiko zvevanhu vanga vasvika pakunyanya kushushikana uye vakatarisana nekutya kwavo kukuru kuenda mberi.
Simba risina miganhu
Simba risingagumi: Iyo ...
Kubva kuna Tony Robbins, munyori uyu anoburitsa simba rechokwadi repfungwa dzako, iro rinokuudza kuti zvese zvaunoda iwe unogona kuwana kana iwe uchizvirwira. Dambudziko nderekuti dzimwe nguva isu tinotungamirwa zvakanyanya nemafungiro akaipa kana zvisina kunaka zvinhu kukonzera mukupedzisira kunyepedzera kuti isu taifanira kutsakatika, kana kurasikirwa nekuziva. Asi, nekuda kwemashoko ari mubhuku rino, unogona kushandura chip mupfungwa dzako, uchishandisa neurolinguistic programming uye Emotional Intelligence.
Iyo ndeimwe yeakanakisisa mabhuku ekuzvibatsira anoshanda segwara rekusasiya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku akanakisa ekuzvibatsira